Uma uya inkampani yokulungisela abahambayo ngesicelo ukhethe eziyokhanga wonke umndeni ke cishe, umphathi ngeke anikele ethandwa kakhulu iholidi inketho. Kusukela Samara Turkey kukhona eziningi izindiza ezilethwa ngqo ogwini imilingo, ulwandle nezwe efudumele, wayetekula ilanga, izihlahla zezithelo ezikhulayo kwesokudla kumgwaqo. Lapha ngifuna ukubuyela kaningi, isikhathi ngasinye uhlangabezana lonke rainbow omkhulu wokudlulisa imizwelo.
The yokungcebeleka ka Samara
Mayelana emabhishi amahle Turkish futhi inkonzo engenakuqhathaniswa nezwa, cabanga kabanzi mayelana ezikhumbuzo esiyingqayizivele izakhiwo kanye art - futhi kuyacaca lapho ukuhlangabezana iyophumula. Kusukela Samara Turkey fly izinkulungwane zezivakashi minyaka yonke. Uyothola amakhulu izindlela nijabula: Uhambo ezithakazelisayo, ukuyothenga emangalisayo ahlukahlukene, yachting, ebhukuda olwandle, diving kanye nokunye okuningi. Kuye ikhono lakho, ogwini Turkish banganikeza amahhotela kusukela ekilasini umnotho atholakale kakhulu namaRashiya, Villas zikanokusho futhi zokuhlala.
Amaholide bonke bathanda
Kuye izintandokazi zakho, ungakhetha siqu, iholide lakho ngabanye. Kusukela Samara Turkey Fika abafisa ukuthuthukisa impilo yazo. Kukhona zonke izimo salokhu. Ihhotela Inkonde ngayinye ifakwe umshini swimming pool ngamanzi evuthayo, amanzi olwandle noma abavamile, angasetshenziswa nganoma yisiphi isikhathi. A ezihlukahlukene izikhungo spa ukunikela uhlelo anti-ukucindezeleka, kubaluleke kangaka ekuphileni kwanamuhla okumatasa. Ukuze amadoda nabesifazane kukhona izifundo iDemo rejuvenation futhi kwesisindo. Ukuza resort, uphonsa off ambalwa Kilos extra - akunjalo kuyiphupho nje? Engeza ukuthi ngokuchichima imifino nezithelo, sezulu esipholile, ulwandle efudumele futhi uthole umoya ohlanzekile. Ukungakwazi Spas, Spas wendawo nethonya enempilo.
abathandi Beach kungaba phakathi nayo yonke inkathi ukujabulela ilanga efudumele. Kulabo abasebenza imisebenzi yangaphandle, kufanele undiza kusukela Samara Turkey njalo ngonyaka. izilwane zasolwandle kwezemidlalo: ngomkhumbi, windsurfing, scuba diving kanye nabanye abaningi - kabanzi lumelwe lapha. Ukuze izinkampani ezincane, inani elikhulu adventure izinkambo kanye disco. Abazali nezingane ungakhululeka kahle, ibayala abahlengikazi Animators banakekele izingane.
Abathanda kanye Ongoti yomlando, tinganekwane izakhiwo lasendulo nentshisekelo hambo engqondweni yethu nge mhlahlandlela. Futhi namathafa emangalisayo kwenkundla injabulo ngokuphelele wonke umuntu. Izintaba namathafa, amahlathi kanye izingadi, ulwandle kanye isihlabathi, nokushona kwelanga - akunakwenzeka ukuchaza, udinga nje ukubona.
OGwini LweMedithera noma Aegean njalo okuhle, kodwa ngoba kwatheleka izivakashi lugujwa kusukela ngo-March kuya November. Entwasahlobo and ekwindla at amanani aphansi uzothola Turkey engenakuqhathaniswa. Samara ngo-September, ungaya eseholidini usuku eziyishumi-ngo- $ 500. Ngokuya izimo zezulu, lwale nyanga ezimenza azizwe atjhaphulukile. Ayikho ukushisa okukhulu, hambo eziningi kangaka ukuletha injabulo kuphela. emoyeni futhi izinga lokushisa lamanzi kuyafana, mayelana 27 degrees. Izivakashi ezivela Samara Autumn - isikhathi esincane sokuphumula, njengoba ukushisa kwehlobo kuyinto engavamile kakhulu.
zokungcebeleka Turkish ku bone kahle noLwandle LwaseMedithera
Imoto kuphela okuletha izivakashi lapho uya khona - kungcono indiza. Samara Turkey, manje indlela ethandwa kakhulu. izindiza ngqo yenziwa "Airlines Orenburg", futhi lapho sasilibangise khona kuyinto Alanya. Ngakolunye zokungcebeleka engafinyelelwa kuphela ushintsho, isibonelo, nge eMoscow. Lokhu edolobheni resort ihlukile ehhotela ukonga kanye izimo ukhululekile, ngaphandle okunethezeka ezingadingekile. Izivakashi uthi inkonzo enhle kakhulu futhi ukudla okuhle. Yini embi ngalo iyona ibanga kusuka esikhumulweni sezindiza.
Eyesibili ekilasini resort umnotho, lokhu Side. Ibanga ukusuka esikhumulweni sezindiza ihlawulelwa "lyuksovskimi" amahhotela ngamanani akhokhelekayo. Ivala Antalya ezintathu, indawo yokungcebeleka enhle, kodwa umnyango kolwandle ungakhululekile, nje eweni emaweni. Imikhaya enezingane asifanele kakhulu.
Ezindaweni ezibizayo kakhulu futhi zasebukhosini Turkey - kuyinto resort of Belek futhi Kundu. Ziyakwazi omncane kunathi ogwini, ifakwe yesimanjemanje. Lapha, emahhotela aphambili, olunesihlabathi nge ushona kancane kancane kolwandle, edolobheni iseduze sezindiza, uma bajwayele sokunethezeka, khona-ke lapha.
Kubathandi yezitolo etholakalayo kanye nokuvakashela izindawo ezishibhile ivula iminyango yayo Turkey. Kemer kusukela Samara uthola inani elikhulu izivakashi. Lokhu raspolozhet resort strip engasogwini ephakathi nolwandle nomhlabathi ezintabeni. Izintaba ukuvikela kusuka umoya nolwandle ngokuqiniseka okukhulu kuqinisekisa sezulu esipholile. abathandi Beach kufanele uqaphele ukuthi ngeke babe abalale amatshe. Beaches eduze ehhotela ligcwele isihlabathi, bese ufaka kolwandle namanje phezu kwala matshe. Kemer nightlife, kuyinto lenqwaba amakilabhu, okuvame ihambisane udumo amakhonsathi.
I zokungcebeleka ka-Aegean Sea
Ababona kangaka ekulalelweni njengoba ebhalwe ngenhla. Piga Beach inikeza ukuvakashela uhambo ukubona indawo, noma resort ukhetha ukuhlala. Kuyinto lolwandle zanamuhla anemisila, alinikela amathuba ezingenakubalwa ukuzijayeza amanzi ezemidlalo. Nezokungcebeleka eziyinkimbinkimbi ne okubhukuda, izinkantolo tennis, nemishayo, ukuzivocavoca ivumela wonke umuntu ukuba bachithe isikhathi inzuzo futhi umphefumulo.
Uma fan of izinkampani ezinomsindo ke owukhethayo Bodrum, iyinhloko-dolobha ekhangayo ukuphila ebusuku e-Turkey, Sinentshisekelo kakhulu. Lena indawo enhle okungakhiwa kuyo Ongoti nenithanda amanzi ezemidlalo, ngokuphuma singena ezingosini ze futhi diving.
Enhlonhlweni ingenye zokungcebeleka amahle kakhulu - Marmaris. Kuthathwa okungcono phakathi kwabo bonke abanye. isithombe European kanye namathafa romantic ukuheha abantu emndenini. Abantu abajwayele ukuvakasha kuyona itholakala itheku iziqhingi ezintathu. Inani elikhulu coves esekusithekeni futhi uncrowded kwenza kube nokwenzeka imali ngosuku sizungezwe imvelo nomuntu obaluleke kakhulu.
Kukhona ezihlotshiswe kahle ikhilomitha lolwandle futhi amanzi olwandle kuyinto crystal ecacile, oluluhlaza. Growing emithi yesundu agcizelele ubuhle kanye exoticism zalezi zindawo.
Njalo inkampani yokulungisela abahambayo e Samara ujabule ukwenza isiphakamiso ukuchitha amaholide abo lapha. Ngoba kukho win win eziyokhanga wonke amalungu omndeni kanye kuzobiza izakhamuzi eziningi edolobheni. Sisuka Samara Turkey nsuku zonke. Airlifts izindiza eziyishumi bahlinza umzila inikezwe:
NordWind usebenza izindiza nsuku zonke ehlobo kuthi njalo ngemva kwezinsuku 10 entwasahlobo and ekwindla. Point of ukufika - Antalya.
"Orenburg izindiza", nsuku zonke kusukela ngo-May kuya ku-September, Antalya.
"Ural Airlines", izinsuku eziyisikhombisa ngenyanga Antalya.
Utair, "Abakan-Avia", "Transaero", ezimbili, ezintathu ngenyanga Antalya.
"Ural Airlines" indiza nge kokuma e Bodrum, kanye ngemva kwezinsuku 10.
NordWind, "Orenburg Airlines", "Airlines Ural" nge a kokuma e Dalaman, kanye ngemva kwezinsuku 10.
Akukona konke okuhlukile air travel bebheke "Samara-Turkey". uhambo isikhathi by izindiza ngqo imayelana 3 amahora. Nge ukudluliswa nginqamula eMoscow Ungasebenzisa "Aeroflot" amasevisi yezindiza. Ngaphezu kwalokho, abaningi charter izindiza ezisebenza ehlobo. Ngo isiqondiso "Moscow-Antalya" ungakwazi fly cishe nsuku zonke, "Moscow-Dalaman» - katsatfu ngeliviki.
Izivakashi eziningi kusukela Samara ukhetha njalo. Isizathu sisobala: ishibhile ukuze 35-75%. Isilinganiso price tag on ithikithi yenethiwekhi njalo ezingeni ruble ayizigidi ezingu-30, futhi izinga izivakashi ingeqi ayizinkulungwane 20. Ukukhethwa kungenzeka uNcibijane amaholide. Ngaphezu kwalokho, umthetho-sisekelo izindiza - uhlale umlayezo oqondile, oqondile, ukulondoloza isikhathi eside.
An abanolwazi umphathi inkampani yokulungisela abahambayo ngeke ukhethe indiza "Samara-Turkey" futhi ukwazi eziningi izipesheli lesi sikhundla esinemali. Ikakhulukazi uma isizini usezofika ekupheleni futhi itholakala ngomzuzu wokugcina.
Lolu hambo nezingane
Ukuze umndeni abasha nezingane Turkey iyona engcono iholidi endaweni. Ihhotela ngamunye ifakwe ebaleni lokudlala, lapho ingane nje ngeke be bored. A evuthiwe izithombe inkonzo kanye nabasebenzi egcwele abahlengikazi ukunakekela kuzovumela abazali ukujabulela ngokugcwele kokuhlala kwawo. Endaweni ehlukile, kufanele kuphawulwe ukuthi kubalulekile ukukhetha izinyanga ekwindla, lapho izinga lokushisa emoyeni iseduze evamile - kuyokusiza ingane yakho kalula uthumele iholidi in Turkey. Amanani izinkambo ngalesi sikhathi lingaphansi kakhulu, okuyinto ebaluleke kakhulu ngoba umndeni abasha. Uma kuwukuthi inkathi ukuvakasha izinsuku ezingu-7 angathengwa $ 1,000 noma ngaphezulu, ngo-September-Okthoba, kungenzeka ukuthenga i $ 500-700.
Izindleko incike resort abakhethiwe. ukonga kakhulu kubhekwa Alanya, Antalya, Kemer. Stars ihhotela lakho futhi, sizothinta lemali ukhokha. Mangisho ukuthi isevisi emangalisayo yonke indawo, ezisukela nesizotha 3 izinkanyezi, saqeda Suites.
Akuve elicwengiweyo, kodwa hhayi exotic kakhulu, ukuthi njengazo zonke izimenywa. Futhi inyama esiqinile futhi abalandeli inyama izitsha uzothola dish ukunambitha. Ubuningi imifino, amakhambi, inhlanzi, inyama eyosiwe kanye ezihlukahlukene, yebo, amaswidi ziyojabula wonke umndeni, ngisho kancane izinyo elimnandi. Ukuthandwa enkulu has kebab - kuyinto inyama, inhlanzi noma inyama yenkukhu okugazingiwe ku umlilo evulekile.
Ukufika e-Turkey e Samara, qiniseka ukuthi uvakashela ezimakethe zendawo. Leli yithuba ukugcwalisa lezingubo fashion emisha at imali okungabizi. Ungesabi ukufeza izimfuno commerce wendawo iyisici evamile, ngakho ezimweni eziningi, akukho lutho kuyofika kini (hhayi nakho ngokwanele). Kodwa uma isitayela wakho ukuxoxisana efana umdayisi, uyonenza isaphulelo.
Uma ekhaya, kuyoba okunenzuzo ukugqama esixukwini, ngoba izinto ezinjengalezi izitolo noma cha, noma intengo nje isikhala. Ngezinye izikhathi ihlelwe ngempelasonto izinkambo kusuka Samara Turkey nje yezitolo, futhi acoshe hhayi kuphela Isikhathi sonyaka (ngasekupheleni kwesizini), kodwa izinsuku. Ngemva kwasemini, izaphulelo ngokuvamile eziphathekayo ezingaphezu kuka ekuseni. Ngakho, ukuya eholidini kusukela Samara Turkey - umqondo omuhle, ufuna ukuletha ekuphileni!
Beautiful Sicily. Ezokungcebeleka ezihehayo
Ulimi Sore - yini okumele ngiyenze?
Chlamydia e amakati: izimpawu kanye nokwelashwa